ထောင်ထဲမှာနေချင်လို့ မိဘကိုဓါးနဲ့ပြန်ရွယ်ပြီး ထပ်ခါထပ်ခါပြစ်မှုကျူးလွန်သူ - JAPO Japanese News
ထောင်ထဲမှာနေချင်လို့ မိဘကိုဓါးနဲ့ပြန်ရွယ်ပြီး ထပ်ခါထပ်ခါပြစ်မှုကျူးလွန်သူ
ကြာ 14 Oct 2021, 16:02 ညနေ
ကျည်ဆန်ရထားထဲမှာ အကြမ်းဖက်ရမ်းကားမှုကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေး
အကြီးစားမတော်တဆမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တို့နဲ့ ကြုံခဲ့ရတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။
ဒီအပြင် နောက်ကျတာမျိုးလည်းသိပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လေ့မရှိတဲ့ ဂျပန်ရဲ့ကျည်ဆန်ရထားဟာ ကမ္ဘာမှာနံပါတ်တစ် စိတ်ချရတဲ့အမြန်ရထားဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ်။
ထိုကျည်ဆန်ရထားရဲ့အတွင်းမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က မှုခင်းတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ ဓါးကိုထုတ်ပြီးရမ်းကားမှုကြောင့် လူ ၃ ဦးအပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရသွားပြီး၊ အဲ့ဒီထဲကတစ်ဦးဟာ သေဆုံးသွားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့တရားခံကတော့ Ichiro Kojima (အသက် ၂၂ နှစ်) ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ထောင်တစ်သက်တစ်ကျွန်းကျဖို့နဲ့ သေတဲ့အထိထောင်ထဲမှာနေသွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တရားရုံးထဲမှာ သူပြောသွားခဲ့တဲ့စကားတွေဟာ အတော်လေးနားလည်ရခက်ပါတယ်..
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၁၁ လပိုင်း ၂၈ ရက်နေ့
ပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးချိန်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာ Kojima ဟာ တရားရုံးထဲဝင်လာတဲ့အချိန်၊ “ ခွင့်ပြုပါအုံး” ဆိုပြီး အသံကျယ်နဲ့အော်ရင်း ရွှင်လန်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
ခေါင်းထိပ်ကိုပြောင်နေအောင်ရိတ်ထားတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ တရားရုံးထဲကို စူးစူးဝါးဝါးလှည့်ပတ်ကြည့်နေတာဟာ ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့တောင် ပြောကြပါတယ်။
အဲ့ဒီနေရာမှာ လူအများကြီးကသက်သေခံထွက်ဆိုပြောနေကြတဲ့အရာနဲ့၊ အဖြစ်မှန်ပတ်သက်မှုမှာကွာခြားမှုမရှိပေမဲ့၊ အမှုစစ်ချိန်မှာကြန့်ကြာနေတဲ့အရာကတော့ “ ဘာကြောင့် အဲ့ဒီလောက်အထိ ထောင်ထဲဝင်ချင်ရတာလဲ?” ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာအစောပိုင်းကတည်းက အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်းကိုမျှော်လင့်နေပြီး၊ သေဒဏ်အထိလည်းဖြစ်မသွားမယ့် ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အသက်ခံလိုက်ရသူနဲ့ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိခဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဒီထွက်ဆိုချက်ဟာ လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
ရှေ့နေ = ထောင်ထဲဝင်ချင်တဲ့စိတ်က ဘယ်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့တာလဲ?
Kojima = ကလေးဘဝကတည်းအိပ်မက်ပါ၊ စပြီးလှုပ်ရှားလာတာကတော့ အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝကပါ..
လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးကျောင်း (အသက်မပြည့်သေးတဲ့အတွက် ထောင်အစားပြန်လည်ထူထောင်ရေးဂေဟာ) ထဲကိုဝင်ရဖို့အတွက် လူသတ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်မယ်ဆိုပြီး၊ အဖေကိုသံတူနဲ့ရိုက်ချပြီး ဓါးနဲ့ပြန်ရွယ်ခဲ့တယ်။
ရှေ့နေ = အဖေဖြစ်သူရဲ့ထွက်ဆိုချက်မှာတော့ ရေဗူးထဲကဟာကိုမကြိုက်လို့ ဒေါသအကြီးအကျယ်ထွက်ခဲ့တာဆိုပြီး ရေးထားခဲ့တာကရော?
Kojima = ရေဗူးနဲ့ကဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးကျောင်းကိုဝင်ချင်လို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့၊ ရောက်သွားတဲ့ရဲစခန်းကို “ လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးကျောင်းကိုသွားချင်တယ်” လို့ပြောတာ၊ သူတို့ကနားမထောင်ကြဘူး။
ရှေ့နေ = လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးကျောင်းကိုရောက်ဖို့ တခြားလုပ်ခဲ့တာတွေရောရှိလား?
Kojima = convenience store မှာ onigiri ကိုအလစ်သုတ်ပြေးပြီး၊ နောက်တစ်ခေါက်ဆိုင်ထဲပြန်ဝင်ပြီး၊ “ ပစ္စည်းအလစ်သုတ်သွားလို့ ရဲကိုခေါ်ပေး၊ ကျွန်တော်လူငယ်သင်တန်းကျောင်းသွားချင်တယ်” လို့ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
တခြားဝန်ထမ်းတွေလည်းထွက်လာပြီး ကောင်တာကဝန်ထမ်းနဲ့ဆွေးနွေးကြတယ်။ ပြီးတော့ “ onigiri ကိုတော့ကျွေးလိုက်မှာမို့လို့ ပြန်တော့” လို့ပြောတယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က “ အရူးမလုပ်နဲ့！ကျွန်တော်လူငယ်ထိန်းသိမ်းကျောင်းသွားချင်လို့ဗျ！ လျော်ပေးဖို့ပိုက်ဆံရှိတယ်ဗျ！” ဆိုပြီး ပိုက်ဆံပေးပြီး onigiri ကိုစားလိုက်ပါတယ်။
ရှေ့နေ = အမေကိုရော တစ်ခုခုလုပ်ဖူးလား?
Kojima = အဖေကိုဓါးနဲ့လိုက်ပြီးနောက် အမေကတစ်လစာစားဖို့အတွက် ယန်း ၁ သောင်းပေးပေမဲ့၊ နောက်ဆက်မပေးတော့လို့ အမေကိုလည်းဓါးနဲ့ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
“ ခင်ဗျားကိုသတ်ပြီး လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးကျောင်းကိုသွားလိုက်မယ်” လို့ပြောပြီး လတိုင်းပိုက်ဆံတောင်းခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့နေ = တခြားရော?
Kojima = တခြားလည်းအစုံလုပ်ဖူးတယ်။ အခုတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့ ကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူး။
တရားလိုဘက် = ထောင်ထဲရောက်သွားရင် ကြိုက်တာလည်းစားလို့မရဘူးနော်?
Kojima = ဟုတ်ကဲ့၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်က ပိုကောင်းပါတယ်။
တရားလိုဘက် = တီဗွီရော၊ ဖုန်းရောသုံးခွင့်မရှိလို့ လွတ်လပ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်?
Kojima = ဟုတ်ကဲ့၊ ထောင်ထဲမှာနေရတာပိုကောင်းမှာပါ။
တရားလိုဘက် = ထောင်ထဲမှာတော့ မကြိုက်လည်းအလုပ်မလုပ်ရင်မရဘူးနော်?
Kojima = ဟုတ်ကဲ့၊ ကိစ္စမရှိပါဘူး။
တရားလိုဘက် = ထောင်ထဲမှာနေရတာ ဘယ်အချက်ကများကောင်းနေလို့လဲ?
Kojima = အဲ့ဒါကိုတော့အခုရှင်းပြလိုက်ရင် ပိုဆိုးသွားနိုင်ချေရှိလို့ မပြောချင်ဘူး။
တရားလိုဘက် = ထောင်ထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း နားအေးအေးနေချင်လို့လား?
Kojima = ထောင်ထဲရောက်သွားလည်း တစ်ယောက်တည်းနေလို့မရမှာကို သိထားပါတယ်။
တရားလိုဘက် = မိသားစုရဲ့ နှောက်ယှက်တာကိုရှောင်ချင်လို့လား?
Kojima = အဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး၊ သက်သက်ထောင်ထဲပဲဝင်ချင်လို့ပါ
တရားလိုဘက် = အချိန်ဘယ်လောက်အထိ ဝင်ချင်တာလဲ?
Kojima = တစ်သက်တစ်ကျွန်းဝင်ချင်တယ်။
တရားလိုဘက် = လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လည်းရှိပေမဲ့၊ အဲ့ဒါရောမလိုအပ်ဘူးလား?
Kojima = ဟုတ်ကဲ့
ယုံကြည့်ချက်အပြည့်နဲ့၊ ဒီအပြင်ပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အသံနဲ့ကို မေးသမျှပြန်ဖြေသွားခဲ့ပါတယ်။
တရားခွင်ကိုလာရောက်နားသူတွေအားလုံးကလည်း Kojima ရဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားတာကိုနားထောင်ပြီး မှင်သေသေဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ပြီးထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ Kojima ဟာကျယ်လောင်တဲ့အသံနဲ့ “ Banzai” လို့အော်ဟစ်ပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ ထိခိုက်နစ်နာသူဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီး ၂ ဦးဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိခဲ့ပြီး၊ အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့၊ ဒီအမျိုးသမီး ၂ ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုထင်လဲလို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ပြန်ဖြေတဲ့အဖြေက “ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ မသတ်နိုင်ခဲ့ဘူး” တဲ့…
သူ့ရဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ဆန္ဒအတွက် သားကောင်ဖြစ်သွားရတဲ့လူတွေဟာ သနားစရာကောင်းလွန်းပါတယ်။
ဂျပန်ကိုအများစုက ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့၊ ဒီလိုမျိုးအရူးတွေရှိတာကြောင့်၊ အလွန်အကျွံစိတ်ချလက်ချမနေဘဲ မိမိကိုယ်မိမိကသာလျှင် သေသေချာချာစောင့်ရှောက်ဖို့ မှာချင်ပါတယ်။
“ Mask Vending machine” နဲ့အအေးခံထားတဲ့ Mask များရရှိနေပြီ !!!!
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ matching app၊ ယောက်ျားလေးအများစုအတွက် ထောင်ချောက်ဖြစ်နေ
ထောင်ထဲမှာနေချင်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ရုတ်တရက်များလာ!!!!
ယဘအိ ( ヤバい )ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်လာပုံ
အိမ်ထောင်သည်များ တွေ့ဆုံပွဲရဲ့ အခြေအနေအမှန်က? ဒီပွဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က တကယ်ပဲ အဲ့ဒါလား?
နေ့လည်စာအတွက် Totoro မီနူးအသစ် !!
မအော်ရဘူးလို့ တားမြစ်ထားတဲ့ roller coaster !!!
ဂျပန်ရောက်ရင် တစ်ကြိမ်လောက်မဖြစ်မနေသွားကြည့်သင့်တဲ့ Kominka Cafe !!!
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ချိန် ယူဆောင်ခွင့်မရှိသည့်ပစ္စည်းများ !!!
သူစိမ်းကို အကြောင်းမဲ့သတ်ဖြတ်မှုမှ တရားခံရဲ့ မိသားစုဟာ ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်၊ ရှင်လျက်နှင့်ငရဲကျသွားသလိုပါပဲ
ဂျပန်ရဲ့မိုက်လွန်းတဲ့ အသံတိတ်အဆောက်အအုံဖြိုချခြင်းနည်းပညာ !!!